अनमोलको फेसबुकमा केटी फ्यान धेरै, छोटो समयमै बढ्यो क्रेज जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
अनमोलको फेसबुकमा केटी फ्यान धेरै, छोटो समयमै बढ्यो क्रेज
नायक अनमोल केसीलाई फेसबुकमा पछ्याउने यूवतीहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । छोटो समयमा नै अनमोलको फेसबुक लाइक पेजमा ५७ हजार फ्यान पुगिसकेका छन् । यो नेपाली चलचित्रका कुनै पनि नायकको लाइक पेजमा सर्वाधिक धेरै हो । सामाजिक संजालमा सधै अगाडि देखिने नायक जीवन लुइटेलको फेसबुकमा २७ हजार लाइक पेज छ । नेपालका केही नायिकाको फेसबुक लाइक पेजमा १ लाख बढी फ्यान छन् । फेसबुकमा सर्वाधिक धेरै फ्यान कमाएकी नायिका रेखा थापा हुन् । अनमोलको फेसबुक लाइक पेज एक फ्यानले बनाइदिएका थिए । उनलाई चलचित्र ‘जेरी’ प्रदर्शनको समयमा फ्यानले हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘जेरी’ चलचित्र चलेपछि अनमोलले फेसबुक पेजमा आफूलाई अगाडि बढाएका हुन् । उनको लाइक पेज छोटो समयमा नै ५७ हजार माथि पुगिसकेको छ । अनमोल यसले आफूलाई अझ कामप्रति उत्प्रेरित गरेको बताउँछन् । उनले आफूलाई भाग्यमानी पनि ठानेको बताए ।
अनमोलको पेजमा कस्ता फ्यान छन् त ? भने-‘अधिकांश यूवतीले मलाई लाइक गरेका छन् । करिब ८० प्रतिशत फ्यान यूवती मात्र छन् । विशेषगरि धरान, पोखराका यूवतीले मन पराएको पाएको छु । काठमाण्डौका यूवतीले पनि पछ्याएका छन् ।’
अनमोलका अनुसार विशेषगरि कोरियन चलचित्र रुचाउँने यूवतीहरुले उनलाई लाइक गरेका छन् । सुरुवातमा कोरियन कलाकारको तस्बिर आफ्नो फेसबुकमा राखेका यूवतीले अहिले अनमोलसँगको तस्बिर जोडेर राखेका छन् । अनमोलका थुप्रै फेक आइडी पनि छन् । जसले आफ्नो बारेमा नकारात्मक खबर दिइरहेको उनको भनाई छ । उनले आफ्नो असली आइडी मा मात्र लाइक गर्न फ्यानहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुक पेज आफ्ना लागि एउटा राम्रो स्थान भएको बताए । उनले आफ्नो चलचित्रको प्रचारको साथै फ्यानहरुसँग जोडिनका लागि लाइक पेजलाई प्रयोग गरिरहेको खुलाए । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ स्टारको रुपमा उदाउँदै गरेका अनमोलको लाइक पेजमा फ्यानको संख्या छोटो समयमा नै निक्कै बढेको देखिन्छ ।